Diiwaanka Maansada Timacadde- Maansayahankii aan muraadsiga aqoon! (WQ: Yuusuf Cabdille Cismaan "Yuusuf-Shaacir")
Friday July 07, 2017 - 18:19:40 in Maqaallo by GI_Wararka Caynaba News
Qabyaalad iyo jeeroo la naco qaadkan lagu waashay Qasti jeeray wada yeelatoo qawlka ku heshiiso Qabyo weeye Soomaaliyeey qiiradaadaniye
14kii June 2017 shirkadda daabacaadda ee Sagaljet waxay iigu deeqday nuqul ka mid ah Diiwaanka Maansada Timacadde ee uu qoray Boobe Yuusuf Ducaale oo dhawaan soo baxay. Sidaan filayo, dhawaan ayaa la soo bandhigi doonaa.
Guud ahaan waa buug soo-jiidasho leh marka loo eego qaabka uu u diryaarsan yahay, waxaanay markiiba ishaadu ku dhacaysaa sawirka Alle ha u naxariistee Marxuum Timacadde oo jaldiga sare ku yaalla. Waa daabacaaddii saddexaad oo sida muuqata shin-dhalad, tuur iyo tarbiicaba laga hufay. Intii aan buug suugaaneed arkayay waa kii ugu maansooyin badnaa, waxaana ku daabacan 150 maanso.
Cabdillaahi Suldaan oo ku caan baxay Timacadde wuxuu safka hore kaga jiray halyeeyadii tirada iyo tayadaba lahaa ee naftooda u sadqeeyay halgankii gobanimo-doonka ama soo hooyay calanka maanta Soomaalidu ku faanto. Hibooyin is barkan ayaa Alle ku mannaystay Timacacde. Wuxuu ahaa maansoyahan Alle u sakhiray curinta ama falkinta tixeed sida uu isaguba ku sheegay dhawr gabay oo ay ka mid yihiin "Masoo ururiyo ee kayga waan igadh salaaxaaye" iyo "Meer meeri mayo oo tixaan meel dhaw ku ogaame.”
Ugu dambayn, Boobe Yuusuf Ducaale oo muddo soddon sanadood ka badan ku raad joogay sooyaalka Timacadde wuxuu innaga furtay xil iyo waajibaad ummadeed. Waxaan odhan lahaa, anigoo soo amaahanaya tixdii Cali Sugulle uu Muuse Galaal ugu boroor diiqay "Waad gudatay Boobow xilkii kula gudbaanaa.”